Doollar Xalay Guday Oo Galbeed Tegay (Yurub) Baadi Goobay- W/Q: Cabdiraxmaan Cadami | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Doollar Xalay Guday Oo Galbeed Tegay (Yurub) Baadi Goobay- W/Q: Cabdiraxmaan Cadami
Aniga iyo dadweyne tiro badan oo suuqa ka adeeganayay qof kastaba goonidiisa wuxuu u maleeyay in lacagta xaddigan dhan ‘container-ro’ meesha lagaga rogay. Haddaba si aan naftayda ugu jawaabo waxaan doonay in aan wax ka ogaado lacagta meesha laga keenay ama ay ka timid. Waxa aan afka u dhaweeyay mid ka mid ah sarifleyaasha oo aan dusha ka aqaano waxaanan su’aalay lacagta cusub ee suuqa buux dhaafisay iyo sheekadeeda. Isaga oo gaagaabsanaya wuxuu ku jawaabay in xubno sarsare oo xukumadda ka tirsan iyo madaxda baanka oo iyaguna la boobaya in ay suuqa ku soo daabulaan si doollar loogu bedelo. Isaga oo ka xun sida ay wax u socdaan iyo masuuliyad darrada madaxda Qaranka wuxuu yidhi “Dawladdu iyadaa shilinka iyo shicibkaba waalaysa, sidee sarrif barar xukumaddu ka dambeyso daawo loogu heli kara?”